သင် အသက်( 20 - 28 ) ဆိုလျှင် ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ
အသက် (၂၀)ကျော်အရွယ်ဟာ ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာသလို မိဘတွေကလည်း အရွယ်ရောက်လာသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်ဆံလာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအရွယ်မှာ ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုလည်း အရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ သင့်အနေနဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရပြီးသည်ဖြစ်စေ မရသေးဘူးဖြစ်စေ၊ (၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒီအချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုကို ရယူဖို့က အရမ်းငယ်သေးတယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးရယူနိုင်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို စတင်ပျိုးထောင် မွေးမြူသင့်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၂၀)ကျော်တွေအတွက် ဒီနေ့လုပ် မနက်ဖြန်မှာ ထူးခြားချက်တွေ ခံစားရမယ့် လုပ်ဆောင်စရာ(၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခုကို သင်စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ သင့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို စီမံရမယ်ဆိုတာက အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကဲ တွက်ကြည့်ရအောင်။ အသက်(၂၅)နှစ်မှာ စတင်ပြီး တစ်လမှာ ဒေါ်လာ(၂၀၀) စုဆောင်းတယ် ဒါမှမဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်တယ် ဆိုကြပါစို့။ သင့်အနေနဲ့ စုဆောင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေရဲ့ တစ်နှစ်ကို (၅)ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တောင် အသက်(၆၅)နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၃၀၅၂၀၄) အထိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ (၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ (၃၀)အစောပိုင်းကို လစ်လျူရူပြီး (၃၅)နှစ်မှ စတင်စုဆောင်းရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်(၆၅)နှစ်မှာ ဒေါ်လာ (၁၆၆၄၅၁) လောက်ပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် လူတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် တစ်နေ့လုံးနေလို့ကောင်းနေမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ယုံကြည်မှုတွေလည်း ပိုရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဦးနှောက် ကျန်းမာဖို့အတွက်ကတော့ တရားထိုင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်တာက သင့်ရဲ့စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပြီး မှန်ကန်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ယောဂ လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Credit - အနာဂတ်အလင်းတန်းများ
Posted by ကြည်မြန်မာ at 4/28/2016 12:00:00 am0comments
Labels: ဖတ်သင့်သောစာ..။, အလုပ်
Father, you are away from us but always with us.
Father, We can not touch and can not speak with you, but we always chat and speak each other as usual in our dream.
Oh Father, No matter you can not live with us for the long term, you are always in our heart and in our soul.
Oh Father,If I imagine you, you are alive with us. So, no matter what happen it is, we can face with your encouragement.
Oh Father, when we lost you, when you left from our lives, we feel all the things had gone.
But, we can stand ourselves with your encouragement, with your effort, with your speech.
Although you can not live us foralong time, you are always with us.
We love you. We trust you. We believe you. We relied on you but now we stand ourselves.
Oh Father, we always want to have the father like you. You are everything for our lives.
Thank you for your love, for your supports, for your encouragement, for your guideness, for your kindness.
Thank you father. Do not forget that we always love you.
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/01/2013 01:37:00 am0comments
မရည်ရွယ်ဘဲ ချက်လိုက်ပြီး မရည်ရွယ်ဘဲ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် တင်လိုက်မိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ..။ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်သွားခဲ့သော် တောင်းပန်ပါတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအတွက် ချဉ်ပေါင်စပ်ချဉ်ချက်က မထူးဆန်းပေမယ့် အဝေးကလူတွေတစ်ချို့အတွက် စိတ်ရှိတိုင်းစားခွင့်မရတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ပါ..။
ချက်ချင်းချက်.. ချက်ချင်းတင်လိုက်တာပါ..။ အတင်းကျက်ခိုင်း အတင်းဓာတ်ပုံရိုက်တင်လိုက်တာပါ..။:D
လုံးချက်ချက်တာပါ..။ (ဟင်းချက်ရင် စိတ်မရှည်လို့ အများအားဖြင့် ဟင်းတွေက မကောင်းပါဘူး..။)
လွယ်လည်းလွယ်၊ မြန်လည် မြန်..။ ၅ မိနစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိမလား...။
ချဉ်ပေါင်ရွက်..၊ခရမ်းချဉ်သီး..၊ ဆနွင်း..၊ ဆား..၊ ငပိ...နဲ့ ဆီတွေအရင်ထည့်ပါတယ်..။ မီးကလည်း ဖွင့်ထားပါပြီ..။ မီး နည်းနည်းနဲ့ပဲ ချက်လေ့ရှိပါတယ်..။ မီးအမြင့်ကြီး မသုံးပါဘူး..။
ဖျစ်ဖျစ်မြည်ပြီး လုံးနေတုံး ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီ အစိပ်ကြီးတွေလှီးထားတာကို ငရုတ်ဆုံနဲ့ထောင်းပါတယ်..။ ထောင်းတာရပြီဆို မီးဖိုပေါ်ကလုံးနေတာတွေနဲ့ရောထည့်ပြီး အားလုံးကိုရောချေပေးပါတယ်..။ ခရမ်းချဉ်သီးကြောင့် တော်တော်နဲ့မခြောက်ပါဘူး..။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ငရုတ်သီးအနီအစပ်တောင့် လေးတောင့် ငရုတ်ဆုံနဲ့ထောင်းပါတယ်..။ ထောင်းနေတုံး အိုးက ကပ်ချင်လာပါပြီ..။
ငရုတ်သီးခပ်ပြီးတာနဲ့ ငရုတ်ဆုံကိုရေနဲ့ကျင်းပြီး ဆုံထဲကရေကို ဟင်းအိုးထဲထည့်ပါတယ်..။ ရေနည်းနည်းခမ်းအောင် စောင့်ရပါတယ်..။ ရေက ဆုံဆေးရေနဲ့ပဲ လောက်ပါတယ်..။ ရေက ဆန်ချင်ခွက်နဲ့ တစ်ခွက်စာလောက်ပဲ ရှိပါမယ်..။ ဟင်းချိုတည်သလောက် များများမထည့်ရပါဘူး..။ ရေခမ်းအောင် နည်းနည်းစောင့်ရပါတယ်..။
ဟင်းခပ်မှုံ့ထည့်ဖို့မေ့တာ နောက်မှ သတိရတယ်..။ ပုစွန်ခြောက်လေးထောင်းထည့်ရင် ပိုကောင်းမယ်..။ ဒါမှမဟုတ် ငါးငါးသေးလေးတွေထည့်..။ ဒါမှမဟုတ် ပုစွန်ဆိတ်လေးတွေထည့်..။ ဒါတွေကတော့ Optional တွေပါ..။ ရှိရင်ထည့်လည်းရ မထည့်လည်းရပါတယ်..။
မစံပယ်ခုမှချက်ရင်း ဖြစ်သွားတာလေးပါ..။ ချက်နည်းမှားနေတယ်လို့ လာမပြောလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါရဲ့..။ ကြိုကာထားတာပါ..။ ဟိုနေ့က ချဉ်ပေါင်ကြော်တစ်ခု အခြေအတင်ဖြစ်နေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်..။ မစံပယ်တော့ ဒီလောက်ပဲချက်တယ်..။ ဒီလောက်ဆို စားလို့ဖြစ်ပါပြီ..။ စိတ်မရှည်တတ်တော့ အရမ်းဟင်းကောင်းတွေစားဖို့ မမျှော်လင့်ဘူး..။ ကိုယ့်ဘာသာစားလို့ဖြစ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 8/26/2013 06:38:00 pm0comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 8/21/2013 04:07:00 pm0comments
မိမိသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပါစေ
ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ရှိနေရင် သင်ဟာဘယ်တော့မှဘဝမှာအရှုံးပေးသူ
အဲလိုပဲ.....ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ပြီးဆုံးတဲ့
အထိတာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိသူဟာ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရှိလာမှာ
မဟုတ်သလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ
ဘယ်အရာကိုမဆို လွယ်ကူစွာရယူချင်တယ်ဆိုရင် သင့်မှာခက်ခဲတဲ့ ဇွဲရှိဖို့
အဲဒီအတွက် ဘယ်တော့မှ Never Give UP.....
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/24/2013 04:57:00 pm0comments